Fahatsiarovana ny Nahafatesan’i Jesosy 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Mooré Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Papiamento (Aruba) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA: NAHAVITA BE TAMINAO ANDRIAMANITRA
Aza Hadinoina Ilay Fotoan-dehibe!
Nandidy ny mpanara-dia azy i Jesosy, ny alina talohan’ny nahafatesany, mba hahatsiaro na hankalaza ny sorona hataony. Nampiasa mofo tsy nisy lalivay sy divay mena izy tamin’izay, ka nanomboka nanao an’ilay antsoina hoe Sakafo Harivan’ny Tompo na Fanasan’ny Tompo. Hoy izy avy eo: “Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.”—Lioka 22:19.
Miara-mivory ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany isan-taona, mba hankalaza ny andro nahafatesan’i Jesosy, isaky ny mitsingerina izy io. Mifanitsy amin’ny alatsinainy 14 Aprily aorian’ny filentehan’ny masoandro izy io, amin’ity 2014 ity.
Asaina ianao hanatrika an’ilay fivoriana, satria hohazavaina bebe kokoa amin’io hoe inona no tena dikan’ny sorona nataon’i Jesosy. Tsy misy vidim-pidirana any sady tsy misy fanantazan-drakitra. Mety holazain’ilay olona nanome anao an’ity gazety ity ny ora sy ny toerana hankalazana ny Fahatsiarovana eny akaikinareo. Azonao atao koa anefa ny mijery an’izany ao amin’ny tranonkalanay ao amin’ny jw.org/mg. Mino izahay fa ho avy ianao amin’io fotoan-dehibe io.